Potehin’ny mpanao politika
Na eken’ireo mpanao politika na tsia, efa ahitana akony ratsy amin’ny fihariana ny krizy misy eto amin’ny firenena. Tsy azo hamaivanina ny fitokonana ataon’ny mpiasa sasany, lasa tsy mampandeha araka ny tokony ho izy ny asa andavanandro. Mampikatso ny fifamoivoizana, ohatra, izany fitokonana izany. Raha taxi-be tokony hahavita fihodinana enina, lasa fihodinana efatra sisa, raha be indrindra. Tsy iantohan’ny mpanao politika mpitarika fitokonana anefa izay fatiantoka mahazo ny mpitatitra izay.
Misy mihitsy aza mpanao politika manao izay tsy mampandeha ny toekarena amin’ny fotoana anoherany ny fitondrana. Ny ao amin’ny Jirama, ohatra, ahitana izany mazava : ao ny mpiasa sasany, na vitsy aza, manao izay hampisy delestazy tsotra izao, satria misy tanjona politika ao ambadika. Hita koa fa misy ny tsara vitan’ny teo aloha, tsy tohizan’ny mpitondra manaraka, satria « mamofompofona » ilay mpitondra teo aloha.
Tsy zahan’ireo mpanao politika ny tombontsoam-pirenena hampisondrotra ny toekarena fa izay fomba rehetra hahazoana toerana ka na hanapotika aza izany, tsy maninona. Tsy mahagaga raha latsaka ambany dia ambany ny harinkarem-pirenena isaky ny misy ny krizy politika.